नगरपालिकाले घर भत्काउँदा झडप -
माघ ३ गते २०७६
बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक गर्ने मिश्रविरुद्ध उजुरी
प्रधानमन्त्रीसहित ४ जनाविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी
सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. खतिवडाले सम्हाले
वामदेव चाडै सांसद !
देशभन्दा ५० अर्ब ठूलो हो र : खनाल
नेपालदूत , मेलम्ची
बाह्रबिसे बजारमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा नगरपालिकाले भत्काउँदा झडप भएको छ। नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमण गरेर बनाएका बजारका घर टहरा बिहान ८ बजेबाट भत्काउन शुरु गरेको थियो।
टहरा भत्काउने क्रममा बाह्रबिसेको खुर्सानीबारीमा झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिए। यसअघि भत्काउन पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा स्थानीयले घर टहरा नहटाएकाले डोजर प्रयोग गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले नगरपालिकाका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरीको उपस्थितिमा घर टहरा भत्काइएको हो।
बजार कुरूप देखिने र सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना भएकाले अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा हटाइएको नगरपालिकाका प्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले जानकारी दिए।
सडक फराकिलो बनाउँदा जाम नहुने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग हुने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक राजेशकुमार दाहालले बताए। बजार क्षेत्र साँघुरो हुँदा जामको समस्या भएको उनको भनाइ थियो। रासस
ग्रिस र टर्की पठाई दिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
कोराेनाका कारण नेपाली कामदार कोरिया पठाउन रोक
जन्मदिन मनाउन जन्मघर पुगे प्रधानमन्त्री
कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रहन दूतावासको आग्रह
दुई बस एकआपसमा ठोक्किदा २० जना घाइते
सुनको मूल्य बढेर दैनिक नयाँ किर्तिमान
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई टर्की र ग्रिस जस्ता देशमा पठाइदिन्छु भन्दै…
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दक्षिण कोरियामा समेत फैलिएपछि त्यहाँ…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६९ औँ जन्मोत्सव मनाउन आज अपरान्ह २…
चीनबाट फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमण दक्षिण कोरियासम्म पुगेपछि त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालीहरूलाई…